Vakakuvadzwa Netsaona Vanoda Kupera kweSimba reBoeing Kupa Zvitupa Zvendege
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Vakakuvadzwa Netsaona Vanoda Kupera kweSimba reBoeing Kupa Zvitupa Zvendege
Airlines • avhiyesheni • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau
Federal Aviation Administrator (FAA) Steve Dickson apupura nhasi (Chitatu, Mbudzi 3, 2021) kwemaawa matatu pamberi pedare reSeneti apo nhengo dzemhuri dzevakaparara dzakagara muvateereri vachiteerera. Uchapupu hwaDickson hunouya svondo rimwe chete mushure mekunge apupura pamberi pedare reUS House Transportation and Infrastructure Committee padanho rekupihwa zvitupa kwendege itsva. Uchapupu hwake hunouya makore matatu zvichitevera kubondera kweLion Air 610 iyo yakauraya vanhu zana nemakumi masere nevapfumbamwe vaiva mundege uye mutsaona yechipiri kwapera mwedzi mishanu yeimwe Boeing 189 MAX737 yakadonha mushure mekusimuka kuEthiopia ikauraya vanhu zana nemakumi mashanu nevanomwe vaive mungarava.
Seneta weUS, Maria Cantwell (D-WA), Sachigaro weKomiti yeSeneti inoona nezvekutengeserana, sainzi nekutakurwa kwezvinhu, vakakoka dare redzimhosva rizere.
Yakanga yakanzi "Implementation of Aviation Safety Reform."
Yakaongorora kukurumidza kwekuita kuchengetedzwa kwendege, zvitupa uye manejimendi ekugadzirisa zvakatemerwa neAircraft, Certification, Safety and Accountability Act (ACSAA) ya2020.
Maseneta akakurukura nezvemaitiro eFAA ekuita kuti ACSAA ishande nebasa rayo rekushandisa zviga zvemutemo zvinoenderana nenguva dzakatemerwa neCongress.
Kwemaawa matatu, Dickson akakurukura misoro yakadai seyekutumwa kweFAA uye maitiro ekupa zvitupa, tsika yekuchengetedza uye maitiro ekutarisa masisitimu kubva pakapfuura ACSAA pamwe nemabatiro eCCIDID pazvirongwa zvazvino zvendege.
Nhengo dzemhuri dzinoverengeka dzakakwanisa kupinda mudare reSeneti nhasi pamunhu kana padandemutande.
Michael Stumo wekuMassachusetts, uyo akafirwa nemwanasikana wake Samya Rose Stumo, makumi maviri nemana, mutsaona iyi, akaombera Sen. Ed Markey (D-MA) nekubvunza kuti FAA ichamira riini kuvimba neBoeing nekuzvitonga. Dickson akati iyo FAA yave kuchengetedza mamwe mabasa ekutonga, asi Stumo akataura kuti zvinoreva kuti mugadziri anoramba achizvitonga pamatanho mazhinji. Stumo akawedzera kuti, "Mugadziri haashanduke kudzamara chiremera chake chekuzvitonga chadhonzwa. Boeing inofanirwa kuratidza zvakare kuti inokwanisa uye yakavimbika. "
Nadia Milleron wekuMassachusetts, akafirwa nemwanasikana wake Samya Rose Stumo, ane makore makumi maviri nemana, mutsaona iyi, akaenda kuna Dickson mushure mekutongwa ndokuti, "Musarega Boeing ichitengesa ndege kunze kwekunge paine kudzidziswa kwekutyaira kwendege iyoyo." Mhinduro yake yaive yekuti aizozvitarisa. Imwe yematambudziko makuru pamusoro pe Kuparara kweBoeing 737 MAX kwaiva kuti pakutanga vatungamiri veBoeing vaipomera vatyairi vendege; zvisinei, ndege dzakabvumirwa kupihwa certification nesoftware system itsva iyo vatyairi vendege vaive vasina kudzidziswa pakutanga uye nehurongwa hutsva hwesoftware hwakaiswa mubhuku rendege. Stumo naMilleron pachavo vakapinda mukutongwa kwanhasi.
Ike Riffel uyo akafirwa nevanakomana vake vaviri mutsaona yeBoeing kuEthiopia akati, “Boeing haina kubiridzira FAA chete, yakabiridzira veruzhinji nepasi rose uye zvavakaita zvakakonzera kufa kwevanhu mazana matatu nemakumi mana nevatanhatu. FAA yedu haizombofa yakave 'yegoridhe mwero' wekuchengetedzwa kwendege chero bedzi hutsotsi nehunyengeri zvichibvumidzwa kuenda zvisina kurangwa.
Chris Moore wekuToronto, Canada, baba vaDanielle Moore ane makore makumi maviri nemana akaurayiwa mutsaona yeBoeing kuEthiopia, vanga vachinyanya kutaura nezvekuchengetedzwa kwendege. Akagumbuka kuti inopfuura hafu yedare ranhasi ine chekuita nenyaya dzisiri dzeBoeing 24Max ndokuti, “Seneti yaifanira kudaidzira dare iri, 'Hesi Dickson, What Up?' Maseneta anofanirwa kutora chikamu chekuchengetedza zvakanyanya - vanogona kuita hurukuro yakaparadzana nezvezvimwe zvinhu pane imwe kunzwa. "
Mhuri neshamwari dzakarasikirwa nevadikani mutsaona yeBoeing 737 MAX jet muna 2019 vanoenderera mberi vachikumbira Congress neUS Department of Transportation (DOT) kuti vamise kugona kwemugadziri wendege kupa ndege dzayo, chirongwa chinobvumidzwa muchirongwa chinodaidzwa kuti. iyo Organisation Designation Authority (ODA) inobvumira mapato matatu kuita mabasa eFAA.
Mazana emhuri neshamwari dzakarasikirwa nevadikani paBoeing 737 MAX ndege yakakumbira vakuru veDOT, kusanganisira Munyori Wezvekutakurwa, Pete Buttigieg naDickson kuti vabvise kugona kweBoeing kubvumidza ndege yayo nekuti "zvave pachena kuti Boeing haisi kambani inogona kuvimbwa nayo. mabasa ekuchengetedza veruzhinji anopihwa neODA, "maererano neavo chikumbiro kuDOT yaGumiguru 19, 2021.
Chikumbiro ichi chinopa zvikonzero gumi neshanu nei kusazvibata kweBoeing kuchida kuti FAA imise Boeing's ODA kusanganisira "kunyengedza iyo FAA" yekambani nezve nzira dzakashandiswa nendege yeMAX "nenzira yekutsausa zvirevo, hafu-chokwadi uye kusiiwa," kugadzira "tsika yeODA iyo inoshandisa dzvinyiriro isina kufanira kuvashandi veinjiniya kuti vasazokwanisa kutonga vakazvimiririra pasina kupokana kwesangano," uye "kutadza kuvharidzira ODA kubva pazvinangwa zveBoeing."
Nekumwe kumberi, Mark Forkner, aimbove mutyairi mukuru wendege itsva yeBoeing, anomiswa pamberi pedare redunhu reForth Worth, Texas achipomerwa mhosva nhanhatu dzezviito zvake zvinosanganisira 737 MAX, kusanganisira kunyepa panguva yekupihwa zvitupa. ndege itsva. Haana mhosva mudare remubatanidzwa muTexas Gumiguru 15, 2021. Kutongwa kwake kuri muna Zvita 15 mudare remubatanidzwa reForth Worth.
Tomra Vocere wekuMassachusetts akarasikirwa nemukoma wake Matt mutsaona iyi, akati, "Mr. Forkner haana kuita ega muinjiniya snafu yakauraya vanhu mazana matatu nemakumi mana nevatanhatu uye haifanirwe kunge iri mhosva chete mukukuvadzwa kukuru uku. Kupihwa kwemushandi wepakati-danho kutuka kune chero munhu akarasikirwa nenhengo yemhuri mundege dzeBoeing. Kuburitswa kwekuferefetwa, kukwidzana, kumatare edzimhosva, uye mapaneru hakuburitse chinhu: hapana pachena, hapana kuzvidavirira, hapana kubvuma mhosva kana shanduko yetsika kuBoeing kana FAA. VaForkner imbudzi inonzwisa urombo sezvo pasina kuregererwa pazvipo zveBoeing: hapana vatungamiriri, hapana nhengo dzebhodhi, hapana kururamisira.